Ị nwere ike inyere m aka ịchọta onye kachasị ọnụ ọgụgụ nke kachasị mma iji nọrọ na Amazon?
Nke a bụ ụfọdụ ngwá ọrụ ebumnuche nke ezi okwu dị iche iche na-eji arụ ọrụ eji eme ihe maka gị ịchọta ozi niile dị mkpa gbasara usoro ọchụchọ ngwaahịa na okwu ogologo oge ị chọrọ maka nhazi njirimara ngwaahịa na Amazon. N'okpuru ebe a, m ga-egosi gị nkowa dị mkpirikpi nke atọ kachasị akọwapụta ihe ndị e ji emepụta atụmatụ isiokwu. Achọpụtara m ihe ngwọta kasịnụ iji nọrọ n'elu nchọnchọpụta ngwaahịa Amazon ahụ na ndepụta kachasị mma. Ma, rịba ama, na ọganihu gị na Amazon SEO na-etolite, asọmnta ego asọmpi na-arịwanye elu - home appraiser edmonton. Ya mere, ị kwesiri icheta na ị ga-eche echiche nke ọma banyere ịhọrọ oke ọdọ mmiri nke ị ga - ebuli. M na-ekwu na mgbe ụfọdụ, ụlọ ahịa na-eme mkpọtụ na azụmahịa ecommerce nwere ike ịme atụmatụ nke kachasị mma maka usoro ọchụchọ ndị a na-enwe obere asọmpi. N'iburu nke ahụ n'uche, ka anyị mechaa mee ihe ndị a ma ọ bụrụ na ịchọta ihe ndị dị na ahịa maka oge ahụ.
1. Nchịkọta Google - N'ezie, ihe a ka ọtụtụ n'ime anyị amaghị dị ka ngwá ọrụ na-eme atụmatụ maka Amazon. Ka o sina dị, Analytics Google ka bụ ụzọ dị mma ị ga-esi nweta nghọta bara uru na arụmọrụ isiokwu ị nwetaworo maka ugbu a. Mgbe ufodu, i nwere ike na-achota na enwere otutu ihe ndi ozo di iche iche bu ndi kwesiri ogo. Ma ebe a bụ mgbe ngwugwu ngwanrọ nke a site n'ịchọ nnukwu ibu nke ụwa na-abata. Ka o sina dị, ọ bụrụ na ị ka dị ọhụrụ n'ebe a, ana m akwado ịnwa Google Analytics mbụ. Ime otú ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịlele ngwa ngwa ihe na-arụ ọrụ ugbu a maka gị, na ihe kpọmkwem chọrọ ngbanwe ma ọ bụ na ọ ga-agbanwe ozugbo.
2. KW Finder - ngwá ọrụ ndị a na-atụpụta isiokwu a dị nnọọ ka nke gara aga (Google Analytics). Ihe a bụ na KW Finder na-amanye otu setị nke metrics ndị yiri nke a na-ejikarị nweta ngwá ọrụ ndị ọzọ dị elu na ntanetịime weebụ, dịka site na Moz ma ọ bụ SEMrush. Ma mụ onwe m, achọtara m KW Finder dị ka ahụmịhe bara uru. M kwenyere na ị ga-enwekwa mmasị na ya. N'ezie, nyere na ị dị njikere ma dị njikere iji oge ụfọdụ rụọ ọrụ na nzacha akwụkwọ ntuziaka dịka (eg, mkparịta ụka na-adịghị mma na / ma ọ bụ nchịkọta ọchụchọ ndị ọzọ maka atụle) iji mee ka ọnụahịa ngwaahịa Amazon dị elu na SEO. A sị ka e kwuwe, ngwá ọrụ a na-atụ aro isiokwu a dị n'èzí, ọ gaghi-akwụ ụgwọ ọbụna otu penny maka iji nsụgharị ya.
3. Isi ihe dị oke l - nhọrọ ikpeazụ m nwere maka ịmegharị nchọpụta mkpado dị omimi bụ nkọwa nke onwe onye. Ma ị nwere ike mfe ijide ya site na nkịtị akpọ aha mkpokọta weebụ (keywordtool.io). N'etiti akụkụ ya kachasị elu, a na-akwado Ngwá Ọrụ Ngwa na asụsụ iri na otu na-enye gị ihe niile dị mkpa nke na-emeri mkpirịta ụka na topo mkparịta ụka ọchụchọ ndị a ma ama - na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onwe gị. Site na mbipụta ya (ọ dị mwute ikwu na Tool Tool Pro ga-eri gị ihe dịka 90 kwa ọnwa) ị nwere ike ngwa ngwa nweta ọchụchọ ọchụchọ, nkwụsị isiokwu gị ugbu a, yana ọtụtụ ndụmọdụ bara uru bara uru, jidere gị ozugbo ndị asọmpi kachasị anya.